Waxbarashada, Caafimaadka & Diinta Islaamka | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Haweenaydii Jaamiciyadda Ahayd!
Mooryaankii Isbaarada Dhigtay, Maxaa u Dambeysay?
Posts in category Waxbarashada, Caafimaadka & Diinta Islaamka
July 8, 2019 Faa’idada Naas Nuujinta
Sidee u Aruursamaan Ilmagaleenka Xilliga Umusha Kaddib?
Miski Cabdinuur Salal, January 17, 2020
Umusha waxa ay billaalabtaa xilliga uu canugga banaanka ugu soo baxo ilmagaleenka, waana isku mid haddii qalniin lagu soo saaro iyo haddii ay hooyada caadi u dhasho. Umusha waqti ahaan waxa aan dhihi karnaa laga billaabo marka ay hooyada dhasho illaa 6 isbuuc ee ugu horeyso, waa waqtiga ay Soomaalida u yaqanaan Afartanka.Waana xilliga ilma galeenka uu u billowda in uu dib ugu noqdo marxladiisa hore ee uu ahaa xilliga uurka ka hor. Isbadaladda Ku Dhaca Ilmagaleenka Xilliga Umusha Waxaa Kamid: Waxa uu ilma galeenka noqdaa mid adagg,halka uu xilliga uurka uu ahaa mid jilicsan oo kale diiqmaayey mar waliba …
Cabdixakiim-Tiyari Cabdillaahi Aaden, January 16, 2020
“Shifo ku absaar Shar kuuma lahee” Labo nin ayaa wax kala ibsanayey, iibsaduhu wuxuu ka codsadey iibiyaha inuu ka iibiyo alaab daqiiq ama Bur ah. Iibiyuhu wuxuu bilaabey inuu Miisaanka u saaro alaabta, kaddib na wuxuu sameynayaa inuu daqiiqda badh ka nusqaamiyo Miisaan ka, kaddiba na ninkii wax ibsanayey ayaa weyddiiyey sababta uu alaabta u kala dhimayo. “Si qaadiddeedu kuugu fududaato ayaan kaaga kala dhimey” ayuu yidhi ninkii. Isma ba uu dhibin wax iibsadihii, ee isna lacagtii ayuu badhka saarey, kaddib na ninkii siiyey. Ninkii wax gadayey, ayaa yaabey, wuxuu na weyddiiyey sababta uu lacagta Diinaar ka ukala dhimey. “ …
Kafeega Caafimaadka Ma U Fiican Yahay?!
Kafeega waxa u kamid yahay cabitaannada ay aadka u cabbaan dadka. Ma cabtay waligaa kafeey? Mise waxa aad ku jirtaa dadka aanaan wali cabbin? Caafimaadka ma u fiican yahay kafeega halkaan waxa aan kugu soo gudbineynaa Faa’iidada caafimaad ee laga helo iyo saameynta caafimaad daro ee uu kugu reebo karo. Kafeega waxa aan dhihi karnaa waa seef labbo af leh. Aan ku billowna faa’iidada caafimaadka ee uu leeyahay : Waxa uu xoojiyaa xasuusta, marka aad cabto kafeega waxa yaraado daalka uu dareemaayo jirkaaga sidoo kale waxa uuna maskaxda siiyaa tamar ay ku shaqeyn karto. Kafeega waxa uu kordhiyaa soo saarida …
Macadnta waxa ay kamid tahay nafaqadda lagama maar-maanka ah ee jirkeenna ubbaahan yahay. Macdanta waxa ay ka qeyb qaadataa joogteynta caafimaadka shaqsiga,sidoo kale waxay door muhiin ah ka cayaartaa koritaanka,Taranka iyo Xilliga nuujinta . Macdanta jirkeenna ubbaahan yahay waxaa kamid Ah: -Botaasiyam (Potassium). kuubar (Copper). Soodiyam koloraadh (Sodium chloride) iyo Aayron (Iron) Maxay Macadanta Jirkeenna U Qabataa? Macdanta waxa ay ka qeyb qaaddataa sameynta lafaha iyo ilkaha. Waxa ay laga maar-maan u tahay sameynta xinjirowga dhiigga. Macdantu waxa ay noo sameysaa dheecanada dheefshiidka. Waxa ay ka qeyb qaaddataa koritaanka uur jiifka. Waxa ay noo sameyaan dheecanada jirka sida: Dhididka, Candhuufta …
Miski Cabdinuur Salal, December 17, 2019
Buradaan waxa ay kasoo baxdaa qanjirka tayroodhka loo yaqaano. Inta badan koritaanno aan caadi ahayn ayey unugyada tayroodhka soo saaraan, marka ay burada ruuxa ku cusub tahayna malaha wax astaamo ah haba yaraatee. Buradu marka ay kasoo baxdo dhuunto waxaa bato hormoonka loo yaqaano Tayroksiina oo uu soo saaro qanjirada tayroodka, waxa aana qofka lagu arkaa calaamado muujinaayo in ay jirto burada dhuunta waxaana kamid ah calaamadahaas: 1. Miisaanka ruuxa oo lumo. 2. Burada dhuunta oo noqoto mid muuqato. 3. Daal badan iyo murqaha qofka oo daciifo. 4. Wadano garaac badan . 5. Qofka oo ay ku adkaato seexashada. …
Waxa aan maantay ka hadleynaa hoos u dhaca heer kulka-jirka aadanaha ee Afka qalaad loo yaqaano (Hypothermia). Hoos u dhaca heer-kulka jirka aadanaha waa xaalad caafimaad daro oo qatar ah, waxa ayna halis galin kartaa nolosha shaqsiga. Xaaladan waxa ay dhacdaa marka uu hoos maro heer-kulka jirka Aadanaha 35.0Co. Waa Maxay Calaamadaha Lagu Garto Hoos U Dhaca Heer –Kulka Jirka Aadanaha? Qofka oo lagu arko jarees badan. Qofka oo ay ku adkaato in uu hadlo. Garashada ruuxa oo hoos u dhac ku imaado, sida in uu dadka kale garan waayo. Garaaco wadana oo yaraado. Neefta ruuxa oo is badasho sida …
Dadka Ma Iscafiyaan? – Qalad marka lagaa galo maxaad sameysa?
Miski Cabdinuur Salal, December 13, 2019
Dunidaan aan ku noolnahay kama dhammaadan qaladaadka ay iska galaan Aadanaha midba midka kale. Haddaba su’aasha is weydiinta mudan ayaa ah qalad markii lagaa galo maxaad sameysa? Ma awoodaa adiga oo aarsan karo in aad cafiso? Cafiska waxa uu kamid yahay daawooyinka lagu daaweeyo qalbiga. Qofka aanan aqoon sida loo cafiya waxa uu u dhintaa cuqdad Aakhirkii isku badasho cudur nafsaani ah. Waa geesinimo in aad cafiso dadka, waana daawada qalbiga, sidoo kale waxa ay xoojisaa xariirka iyo kalgaceylka dadka ka dhaxeeyo. Dagaalkii Uxud uu hoggaaminaayey Subanaheenna(N.N.KH) ayaa waxaa kasoo qeyb galay Xudeyfa iyo Aabihii Yamaan,waxa ayna imaadeen Madiina …
Caagiriyahu waxaa uu kamid yahay xaaladaha caafimaad daro ee ugu caansan oo lagu arko dhallaanka,waana xaalad u baahan daryeel caafimaad.Cagaariye waxa aan dhihi karnaa marka aan ku aragnno kalar jaalle ah maqaarka iyo indhaha canugga. Cagaariyaha waxa uu dhacaa marka ay sara u kacaan bilorabiinta ku jirta dhiigga. Qiyaas ahaan 80% waxaa lagu arka cagaariyaha isbuuca ugu horeeyo ee dhalaanka dhashay waqtigiisa ka hore sida ilmaha ku dhasha 7bil . 60% waxaa cagaariyaha lagu arkaa dhalaanka ku dhasho waqtigooda. Halka 10% lagu arko ilmaha bila dhaafka ku dhashay iyo ilmaha naas nuuga ah. Haddii aad ku aragto canuggaada cagaariye iyo …
Mooska waxa uu kamid yahay miraha ugu macaan ee laga cuno Adduunka. Dalkeena waxa uu Hodan ku yahay Mooska. Cilmi baaris ay Taliyaaniga sameysay waxa ay ku caddaysey in Mooska ugu macaan Adduunka laga helo Dalkeenna Soomaaliya. Mooskii waxaa laga helaa fitamiinnada badan iyo macdan muhiim u ah jirka.Sidoo kale cilmi baaris ay sameysay Landon ayaa waxaa ay ku caddeysey dadka cuno 1xabo oo moos ah maalinkii 34% in ay yartahay in uu ku dhacdo cudurka neefta. Waa Maxay Faa’ida Mooska Laga Helo? Mooska waxa uu ka qeyb qaataa ka hortagga nafaqo-darada ilmaha ku dhacdo. Mooska waxa uu qurxiyaa maqaarka. …
Dagaal Aan Dhammaad Lahayn, Xal Maloo Heli Karaa? posted on April 8, 2019
Barashada Maamulka Ganacsiga Caalamiga ||Tukesomalism.com posted on October 2, 2015
Qorshaha Ganacsiga “Business Plan” posted on November 12, 2016
Sidee u Aruursamaan Ilmagaleenka Xilliga Umusha Kaddib? posted on January 17, 2020
Haweenaydii Jaamiciyadda Ahayd! posted on January 19, 2020